Izindatshana zikaJayson DeMers ku Martech Zone |
Imibhalo nge I-Jayson DeMers
Amaqhinga ama-5 amahle we-SEO Abaculi Abadonsa Kanzima Abangawasebenzisa
NgoLwesine, July 18, 2013 I-Jayson DeMers
Ngakho-ke ungumculi ofuna ukwenza isitatimende online futhi ucabanga ngokwenza amasu we-search engine optimization (SEO) akusebenzele? Uma kunjalo, yaziswa ukuthi, ngenkathi ingekho inhlamvu yomlingo ekusetshenzisweni kwenjini yokusesha, futhi akunzima ukuthuthukisa ukubonakala kosesho lwakho ngaphakathi kweGoogle neBing. Nazi izindlela ezinhlanu ezisebenzayo ze-SEO zabaculi zokuthuthukisa ukubonakala kwenjini yokusesha. 1. Ukubhuloga Ukubloga kuyindlela enhle
Isixazululo sesoftware esakhiwe kahle sebhizinisi (i-BI) sibalulekile kunoma iyiphi inhlangano efuna ukuthola i-ROI yemizamo yabo eku-inthanethi. Noma ngabe kulandelwa iphrojekthi, umkhankaso wokumaketha nge-imeyili, noma ukubikezela, inkampani ayikwazi ukuchuma ngaphandle kokulandela izindawo zokukhula nethuba ngokubika. Isoftware ye-Analytics izobiza isikhathi nemali kuphela uma ingathwebuli izifinyezo ezinembile zendlela ibhizinisi elenza ngayo. Bheka lezi zizathu eziyisithupha zokuyeka eyodwa
Ngokuhamba kwesikhathi, i-SEO isiba lukhuni futhi inzima ngokwengeziwe, kepha ngabe lokho kufanele kusho ukuthi kubiza kakhulu? Akuzona zonke izinkampani ezidinga izinsizakalo ze-SEO ezisuselwa ku-inthanethi noma ezihlobene ne-IT. Eqinisweni, iningi lincane, amabhizinisi endawo asebenzela indawo ethile. Laba bantu badinga i-SEO yendawo kune-bendabuko, i-SEO kazwelonke. Amabhizinisi endawo nabantu ngabanye - odokotela bamazinyo, abasebenza ngamapayipi, izitolo zezingubo, izitolo ze-elekthronikhi — abanaso isidingo esiphuthumayo sokubeka izinga eliphezulu ekusesheni komhlaba wonke
NgoLwesibili, ngoJuni 11, i-2013 I-Jayson DeMers
Imikhuba emihle yokusebenza kwamakhasimende idinga okuningi kunokumamatheka, yize lokho kuyisiqalo esihle. Amakhasimende ajabulile aholela ekuphindaphindweni kwebhizinisi, ukukhuphula ukubuyekezwa okuhle (okukhuthaza i-SEO yendawo), kanye nezimpawu ezandayo zomphakathi ezinemibono emihle (okuvula ukubonakala kosesho lwe-organic), futhi ayikho inkampani engaba khona ngaphandle kwamakhasimende abo. Nazi izindlela ezinhlanu ezilula zokuqinisekisa ukuthi amakhasimende akho azizwa ethandwa. 1. Buza imibuzo efanele Yonke inkampani kufanele ibuze lo mbuzo nsuku zonke: Ini
Ukwakha i-buzz ezungeze ibhizinisi nokwenza izethameli zakho eziqondiwe zibe nentshisekelo kumikhiqizo noma izinsizakalo zakho kuyisinyathelo sokuqala sokwakha umphakathi oqotho. Esikhathini esifushane, lokhu kungaholela ekwandeni kwezimoto nokuthengisa. Esikhathini eside, lokhu kungasungula ibutho lamanxusa emikhiqizo asebenza njengeqembu labathengisi bama-guerilla. Njengoba ukunqoba izinhliziyo zabantu bakho kuncike kakhulu ekuzibandakanyeni kwezilaleli, kubalulekile ukusebenzisa
I-Penguin 2.0: Amaqiniso amane Okufanele Uwazi
ULwesihlanu, May 24, 2013 ULwesihlanu, May 24, 2013 I-Jayson DeMers
Kwenzekile. Ngokuthunyelwe okukodwa kwebhulogi, ukukhishwa kwe-algorithm, namahora ambalwa wokucutshungulwa, kukhishwe iPenguin 2.0. I-intanethi ayisoze yafana. UMatt Cutts ushicilele okufishane ngalesi sihloko ngoMeyi 22, 2013. Nawa amaphuzu amane abalulekile okufanele uwazi ngePenguin 2.0 1. IPenguin 2.0 ithinte u-2.3% wayo yonke imibuzo yamaNgisi ne-US. Hlehla umsindo ongu-2.3% kuwe uthanda inombolo encane, khumbula ukuthi
Izinzuzo ezi-5 zokungeza i-infographic kusayithi lakho
ULwesibili, May 14, 2013 ULwesine, April 27, 2017 I-Jayson DeMers
Abantu baqhutshwa izithombe namavidiyo, futhi kumayelana nesikhathi lapho ama-infographics athole inhlonipho ebafanele. Bangaphezu kwesithombe nje esihle; banakho okudingekayo ukuze kusabalale igciwane kanye nokwenza ngcono ukuqwashisa ngomkhiqizo, izimpawu zomphakathi, kanye ne-buzz yemidiya. I-infographics ipakisha i-punch eningi esithombeni futhi ingasetshenziselwa ukufanekisa iphuzu bese ubopha amaqiniso ngokuhlanzekile. Okukhulisa kakhulu inani lazo iqiniso lokuthi
NgoMsombuluko, Ephreli 22, 2013 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 I-Jayson DeMers
Ngamasayithi ezokuxhumana nabantu afana ne-Twitter kanye ne-Facebook ekukhuphukeni kwesimo sezulu, izinkampani seziqala ukufaka idatha eqoqwe kulezi zingosi zomphakathi kanye nabasebenzisi bayo ezicini eziningi zebhizinisi labo kusuka ekumaketheni kuya ezindabeni zangaphakathi zabasebenzi - futhi ngesizathu esihle. Inani elikhulu lemininingwane yezokuxhumana likwenza kube nzima kakhulu ukuhlaziya. Kodwa-ke, izinsizakalo ezahlukahlukene zedatha ziyavela ukuphendula inselelo yokwenza umqondo wakho konke lokhu